Aragti: Qurba-Joogta Beesha Murursade oo baaq digniin ah ka soo saarey in kursigii Karanle
Qurba-Joogta Beesha Murursade oo baaq digniin ah ka soo saarey in kursigii Karanle la isku dayo in beesha Murursade ay qaadato.
Dhamaan qurbo joogta beesha Murursade ee ku nool qaaradaha kala duwan ee caalamka siga Ameerika, Yurub, Carabta iyo Afrika ayaa ku tilmaantey ceeb iyo waxa aan damiirka bani aadanka ee xaalasha uusan ogolaan karin in la isku dayo in krusigii beesha Karanle la isku dayo in la siiyo beesha Wadeere oo horey u heystey lix xubnood oo xildhibaano ah.
Qurbo-Joogta ayaa codsadey in beesha Murursade ay dib iskugu laabato oo waliba hal kursi ka badan la siiyo beesha Karanle.
Qurbo-Joogta beesha Murursade ayaa codsadey in odayaal dhaqameedka Murursade ee jooga gudaha dalka Soomaaliya ay kulan degdeg ah yeeshaan si loo xaqiijiyo inaan lagu xadgudbin kursiga kaliya ee beesha Karanle ay qeybta u heshay haddii kale waxa ka yimaada ay ka masuul yihiin cidii sameysay xadgudubkaas isla markaana aan ceebtaas mara-ka dhicida ah aan lala wadaagi doonin.
1- Jaaliyadda beesha Murursade ee Norwey
2- Jaaliyadda beesha Murursade ee Sweden
3-Jaaliyadda beesha Murursade ee Danmark
4-Jaaliyadda beesha Murursade ee Finland
5-Jaaliyadda beesha Murursade ee Germany
6- Jaaliyadda beesha Murursade ee Itaaliya iyo Switzerland
7-Jaaliyadda beesha Murursade ee United Kingdom(Ingiriiska)
8- Jaaliyadda beesha Murursade ee Holland, Belgium iyo Austria
9- Jaaliyadda beesha Murursade ee Mareykanka
10- Jaaliyadda beesha Murursade ee Kanada
11- Jaaliyadda beesha Murursade ee Australia
12- Jaaliyadda beesha Murursade ee Sacuudi Carabiya
13- Jaaliyadda beesha Murursade ee Imaaraadka Carabta
14- Jaaliyadda beesha Murursade ee Qatar
15- Jaaliyadda beesha Murursade ee Kuweyt
16- Jaaliyadda beesha Murursade ee Kenya
17- Jaaliyadda beesha Murursade ee Itoobiya
18- Jaaliyadda beesha Murursade ee Ugaanda
19-Jaaliyadda beesha Murursade ee Koonfurta Suudaan
20- Jaaliyadda beesha Murursade ee Suudaan.
21- Jaaliyadda beesha Murursade ee Masar
22-Jaaliyadda beesha Murursade ee Turkiga
23-Jaaliyadda beesha Murursade ee Yaman
24- Jaaliyadda beesha Murursade ee Koonfur Afrika
25-Jaaliyadda beesha Murursade ee Musabiik abdullahihassan@hotmail.com